Madaxwaynaha Puntland oo kormeeray Qaybo Ka mid Ah Xarumaha Dawladda ee Gaalkacayo
Madaxwaynaha dawladda Puntland Dr.C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo taariikhdu tahay 02 January 2018 waxa uu kormeeray qaar kamid ah xarumaha dawladda ee magaalada Gaalkacayo. Madaxwaynaha ayaa waxaa kormeerka ku wehelinayay maamulka Gobolka Mudug, kan degmada Gaalkacayo masuuliyiin ka tirsan goleyaasha dawladda Puntland, saraakiil ka tirsan taliska ciidamada Puntland, saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland iyo masuuliyiin kale.
Goobaha uu booqday Madaxwaynu ayaa waxaa kamid ahaa, kaantaroolka koonfureed ee magaalada Gaalkacayo, dhismaha dugsiga nabadda [peace school] dhismaha maxjarka magaalada, kaamka qaxootiga ee Samawade, xarumaha ciidamada Daraawiishta iyo Booliska ee magaalaga Gaalkacayo.
Madaxwaynaha Puntland ayaa waxa uu kormeerkiisa ka bilaabay kaantaroolka koonfureed ee magaalada Gaalkacayo, waxaana uu halkaasi Madaxwaynuhu kula kulmay saraakiisha kaantaroolka, isagoona ka xog waraystay saraakiishaasi sida ay u socoto shaqada kaantaroolku.
Sidoo kale Madaxwaynaha ayaa waxaa uu booqday Maxjarka wayn ee magaalada Gaalkacayo kaas oo dhismihiisa ay hirgelisay dawladda Puntland, Isla markaana waxa uu Madaxwaynuhu soo kormeeray guud ahaan dhismaha maxjarka oo heer geba geba ah maraya.
Dhinaca kale Madaxweynaha dawladda Puntland oo sii wata kormeerkiisa shaqo ayaa waxaa uu kormeeray kaamka Samawade oo ah kaam ay ku nool-yihiin dad barakacayaal ah, kuwaasi oo ay wax yeelaysay abaartii ku dhufatay deegaanadii ay ku noolaayeen, dadka barakacayaasha ah ee kaamkaasi ku nool ayaa Madaxwaynaha uga xog waramay xaaladdooda nololeed iyo tan caafimaadba.
Ugu danbayn, Madaxwaynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo masuuliyiinta kale ee kormeerka ku helinaysey ayaa waxa ay booqdeen goobo ay kamid ahaayeen Xarumaha ciidamada Daraawiishta iyo Booliska, waxaana uu kula dardaarmay Madaxweynu shacabka gobolka Mudug inay ilaashadaan nabad-gelyadooda, xasiloonidooda, horumarkooda iyo wada-jirkoodaba madaama ay yihiin dad ehel ah oo walaalo ah.